Ra'iisul Wasaare Khayre oo ka dhawaajiyay hadal uu ku difaacayo ciidamada Xasilinta – Puntland Post
Ra’iisul Wasaare Khayre oo ka dhawaajiyay hadal uu ku difaacayo ciidamada Xasilinta
Muqdisho (PP) ─ Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Khayre oo ay waheliyaan Wasiirka Amniga Gudaha, Taliyayaasha Booliska iyo Asluubta, ayaa xalay kormeer ku tagay Xarunta dembi baatista (CID), Taliska Booliska, Dugsiga tababarka Gen. Kaahiye, Xarunta Gaadiidka Ciidanka Booliska, Taliska Ciidanka ilaalada Nabad gelyada wadooyinka iyo qaar ka mid ah isgoysyada Ciidamadu ka wadaaan Hawl-gallada ammaanka lagu sugayo.
“Waxa aan aad ugu mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed oo aad dulqaad u muujiyay lana shaqeeya ciidamada sugidda Amniga. La shaqeynta ciidamada waxa ay qeyb weyn ka tahay in nolosha magaalada wax laga bedelo. Waxaan idiin ballan qaadeynaa in aan sii dardar gelin doonno oo aan gaari doonno waqti aan baaritaan badan loo baahneyn. Ciidamadu waxa ay ka shaqeeyaan in ay badbaadiyaan nafta dadka Soomaaliyeed, waxa aan idinka codsaneynaa in aad u dul qaadataan oo aad kala shaqeysaan dadaaalkaas,” ayuu yiri Ra’iisul wasaare Khayre.
Ugu dambeyn, hadalka Ra’iisul wasaaraha ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo shalay ay ciidamada amniga ee ay u xiran yihiin waddooyinka Muqdisho ay toogasho bareer ah ku dileen laba wiil oo waday mooto bajaaj, iyadoo aan la ogeyn illaa hadda sababta keentay inay askartu toogtaan dhallinyaradaas bajaajleyda ah oo dhawaan xad-gudubyo ka dhan ah meheradooda ka dhigay Muqdisho.